Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Preeclampsia waxay saameyn kartaa uur kasta
Preeclampsia, xanuunka hypertensive ee uurka, waa sababta ugu weyn ee dhalmada dhicis ah iyo qayb weyn oo ka mid ah natiijooyinka xun ee hooyada iyo dhimashada hooyada. Bisha Maajo, Preeclampsia Foundation, oo ah hay'ad u doodda bukaan-socodka oo fadhigeedu yahay Mareykanka, ayaa ka shaqeyneysa sidii loo hubin lahaa in dhammaan waalidiinta uurka leh ay ogaadaan in preeclampsia ay saameyn karto qof kasta, uur kasta.
Mu'asasada Preeclampsia waxay ku biirtaa la-hawlgalayaasha caafimaadka hooyada ee hormuudka ka ah May kasta si ay u baraan haweenka calaamadaha iyo calaamadaha cudurka preeclampsia xilliga uurka, iyo inay ogaadaan inay "wali halis ugu jiraan" preeclampsia preeclampsia ka dib dhalmada ilmahooda.
Preeclampsia waxay ku dhacdaa qiyaastii 1 ka mid ah 12-kii uur ee kasta ee dalka Maraykanka, waxayna u saamaysaa haweenka si aan kala sooc lahayn iyada oo aan loo eegin caafimaadka, helitaanka kheyraadka, jinsiyadda, ama heerka dhaqan-dhaqaale. Iyadoo ay jiraan arrimo khatar ah oo la og yahay, oo ay ku jiraan uurka ugu horreeya, taariikhda shakhsi ahaaneed ama qoyska ee dhiig karka, ama uu ku dhacay preeclampsia ee uurka hore, cilladdu waxay sidoo kale ku dhacdaa haweenka aan lahayn wax khatar ah.
"Hadda daawaynta preeclampsia ma jirto, markaa ka warqabka calaamadaha iyo calaamadaha, haweenka uurka leh waxaa lagu awood siin karaa inay u gudbiyaan welwelkooda daryeel bixiyayaasha caafimaadka iyo in si dhow loola socdo si loo hagaajiyo natiijooyinka," ayuu yiri madaxa Preeclampsia Foundation Eleni Z. Tsigas. .
Ololaha Bisha Wacyigelinta ee Preeclampsia ee 2022 waxa kale oo uu muujin doonaa saamaynta nolosha dhabta ah ee preeclampsia ay ku leedahay haweenka iyo qoysaskooda iyada oo la muujinayo natiijooyinka ka soo baxay Daraasadda Diiwaanka Bukaanka ee Preeclampsia, oo dhawaan lagu daabacay BMJ Open.
Marar badan oo ay la socdaan kuwa ka badbaaday cudurka preeclampsia, xanaaqa ayaa ah 'Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaan lahaa khataraha,' ama 'Waxaan u malaynayay in gacmaha bararsan ay qayb ka tahay uurka.'
"Natiijooyinka ka soo baxay daraasadda Safarka Bukaan-socodka ayaa muujinaya heerarka caadiga ah ee ay la kulmaan haweenka. Macluumaadkani wuxuu noo ogolaanayaa inaan si wanaagsan u caawino iyaga, qoysaskooda iyo bixiyayaasha daryeelka caafimaadku inay gaadhaan natiijooyin wax ku ool ah," ayay tidhi qoraaga sare ee daraasadda, Dr. Ellen Seely, Brigham iyo Isbitaalka Haweenka, Boston, Mass.
Iyadoo cilmi-baaristu ay sii socoto inay safka hore kaga jirto hadafkooda, Aasaaska waxay ku dhiirigelisaa badbaadayaasha inay ku lug yeeshaan daraasadaha sida Safarka Bukaanka.
"Daraasaddani waxay soo bandhigtay fursad gaar ah oo 'khariidad' ah' sida bukaannada laga helay cudurka preeclampsia ay u guuraan khibradda ogaanshaha, maaraynta, daaweynta, iyo soo kabashada jidhka iyo maskaxda ee dhalmada ka dib," ayuu yidhi madaxa Preeclampsia Foundation iyo wada-shaqeeyaha daraasadda Eleni Tsigas. "Daraasadda ayaa loogu talagalay in lagu aqoonsado dhibcaha xanuunka caadiga ah ee khibradda bukaan-socodka ee la wadaago oo markaa loo isticmaali karo bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka si loo hagaajiyo natiijooyinka."
Inta lagu jiro bisha, badbaadayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay raacaan #uur-qaadasho kasta iyo #preeclampsia oo ay ka qaybqaataan dhacdooyinka warbaahinta bulshada oo ay ku jiraan kulamo xiriir ah oo online ah oo lala yeesho ururada ku takhasusay fahamka saameynta preeclampsia. Ilaha waxbarashada bukaan-socodka iyo bixiyaha dheeraadka ah iyo faahfaahinta dhacdooyinka kore ayaa la heli karaa www.preeclampsia.org/awarenessmonth.
Tsigas waxa uu intaa ku daray, “Shaqadayadu mar walba waxay ahaan doontaa in aan helno sabab iyo dawo. Dhanka kale, qalabka noogu weyn waa waxbarashada.